Kiribati dia hanao fanamby amin'ny fomba fijerinao ny fiainana: hisokatra indray ho an'ny fizahan-tany amin'ny Janoary
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Kiribati dia hanao fanamby amin'ny fomba fijerinao ny fiainana: hisokatra indray ho an'ny fizahan-tany amin'ny Janoary
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Kiribati • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
700 kilometatra akaiky kokoa avy any Honolulu mankany amin'ny Repoblikan'i Kiribati, toy izay ny sidina mankany Los Angeles na San Francisco.
Kiribati dia iray amin'ireo firenena nosy vitsy malaza indrindra, ary firavaka tsy voakitika ho an'ny fizahan-tany South Pacific.
Kiribati, Repoblikan'i Kiribati, ofisialy, dia firenena nosy mahaleo tena ao amin'ny Oseana Pasifika afovoany.
Ny mponina maharitra dia maherin'ny 119,000, ny antsasany mahery amin'izy ireo dia monina ao amin'ny atawa Tarawa. Ny fanjakana dia misy atol 32 sy nosy haran-dranomasina iray lehibe, Banab
Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany ao Kiribati (TAK) dia niarahaba ny fanambarana omaly nataon'ny te Beretitenti, Andriamatoa Taneti Maamau momba ny fanapaha-kevitry ny governemanta hanokatra sisintany nasionalin'i Kiribati manomboka ny Janoary 2022.
Kiribati dia natao ho an'ny mpandeha - ireo izay maniry fatratra ny hikaroka sy hahita, olona izay tia fitsangatsanganana an-dalambe mankamin'ny toerana nisy olona vitsivitsy talohan'izay, ary ireo olona te hahatakatra firenena - tsy mahita izany fotsiny.
Kiribati dia nanambara tamin'ny Jolay, hikatona ny sisin-tany.
Kiribati dia hanao fanamby amin'ny fahitanao ny fomba tokony hisy ny fiainana ary hasehoko anao ny fomba fiainana tsy dia manahirana kokoa eo amin'ny toerana voalohany ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina.
Any amin'ny Oseana Pasifika ekoatera, manome ny mpanjono kilasy eran-tany (na lalao na jono taolana) avy ao amin'ny Nosy Kiritimati i Kiribati atsinanana. Any andrefana dia ny vondrona nosy Gilbert, izay manolotra traikefa ara-kolontsaina mahatalanjona sy tsy manam-paharoa.
Ny renivohitr'i Tarawa dia manana toerana sy zava-kanto manan-tantara izay iray amin'ireo ady nahakivy indrindra tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, ny ady tao Tarawa.
Raha mitsidika ianao ao anatin'ny asanao dia mamporisika anao izahay zahao Kiribati hiaina ireo fahafinaretana ireo - ny Tarawa atsimo dia tsy tokony ho ny Atoll tokana vangianao rehefa 33 no safidinao, na ny Tarawa Avaratra eo akaiky eo aza dia manome fomba fijery tena hafa tokoa!
Tamin'ny fanambarana nataony dia nanentana ny mponin'i Kiribati izay mahafeno fepetra amin'ny vaksinin'ny COVID-19 ny filoha Maamau mba hamenoana ny fatrany roa alohan'ny faran'ny taona. Nasongadiny fa ny firaisankina sy ny fanarahana ny fameperana sy ny fitsipika dia tena zava-dehibe amin'ny fiarovana ny I-Kiribati rehetra.
Niantso ireo antitra sy antitra vehivavy ny antokon'olona, ​​vondrona fiangonana, vondrona tanora, fikambanam-behivavy, Filankevitra amin'ny nosy, vondrom-piarahamonina ary ray sy reny isam-pianakaviana mba hanampy amin'ny famporisihana ireo mpianakavy sy namana hatao vaksinin'ity virus mahafaty ity.
Tamin'ny alàlan'ny programa fizahan-tany momba ny fizahan-tany, TAK dia namolavola ny Kiribati fizahan-tany sy ny hospitality Protocols ho an'ny New Normal ary manao fiofanana momba ny fiarovana COVID-19 ho an'ny mpamatsy trano rehetra.
Ny fananana any South Tarawa, North Tarawa, Abaiang, Tab North ary Tab South dia nahavita ny fiofanana nomen'izy ireo ary ny sisa amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny serivisy mpizahatany any amin'ny nosy hafa dia hahazo ny fiofanana COVID-19 azy ireo amin'ny volana novambra 2021. Nanamafy ny talen'ny TAK, Petero Manufolau fa hisy fiofanana ho an'ny famelombelona indray ny indostrialy amin'ny Desambra 2021, alohan'ny hisokafan'ny sisintany amin'ny Janoary 2022.
Ao anatin'ny fandaharan'asa famerenana amin'ny laoniny, ny TAK koa dia hanomboka ny tetikady nomerika momba ny varotra nomerika amin'ny volana septambra ho fampiharana manomboka amin'ny volana oktobra 2021, hanomezana ny nosy Pasifika 3 volana hamoahana ny fampielezan-kevitra sy ny programa marketing.
Ireo mpitsangatsangana miverina na mitsidika an'i Kiribati voalohany tamin'ny taona 2022 dia afaka manantena fanatsarana traikefa amin'ny alàlan'ny programa Mauri Mark, toerana fanombanana, ary fandaharam-pankasitrahana amin'ny hotely, ary ny Mauri Way, programa Serivisy ho an'ny fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany Kiribati ho an'ny mpamatsy serivisy fizahantany rehetra.
Ny antsipiriany momba ny fepetra takiana amin'ny COVID-19 an'ny mpandeha an'i Kiribati ho an'ny fanokafana ny sisintany iraisam-pirenena amin'ny Janoary 2022 dia omena torohevitra raha vantany vao misy izany avy amin'ny governemanta.